OweLeopards neqhinga elisha lokujima
Mthokozisi Mncuseni | January 15, 2020
USETHATHE isinqumo sokwenza into angakaze ayenze njengomqeqeshi uCavin Johnson onethwa yizinduku kusukela ethathe ngokugcwele umsebenzi wokuba yinhloko yabaqeqeshi kwiBlack Leopards.
UJohnson umenyezelwe njengomqeqeshi omusha kwiLeopards ngasekupheleni konyaka odlule engena endaweni kaLuc Eymael osule isigubhukane.
Ufike kuleli qembu ethwelwe ngeqoma ukuthi uzozishintsha izinto kodwa indlela aqale ngayo ikucacisile ukuthi bangazithola begencwa yizembe uma bengashintshi ukuqalaza. Njengamanje iLeopards isendaweni yesibili ukusuka emsileni kwazise isanqobe kane kuphela emidlalweni engu-17.
Kwemithathu esidlalwe yiLeopards ngaphansi kwesandla sikaJohnson yonke ithole induku. Kowokuqala ubingelelwe yiHighlands Park ngo 2-1. Kudlule lapho wabhekana neChippa United ewuthwele wonke umdlalo kodwa wagcina eguqa ngo 2-1 nakuwona.
Kowakamuva abebevakashele kuwona iBloemfontein Celtic, iLeopards ishaywe ngo 4-2. Okwenza izinto zibukeke zinzima kakhulu kuJohnson wukuthi olandelayo umdlalo uzokwamukela kuwona iKaizer Chiefs evutha amalangabi kulezi zinsuku. Isimo salo mqeqeshi oke wasebenza nakuMaZulu, asisihle kwazise uyaziwa usihlalo weLeopards, uDavid Thidiela ukuthi akanankinga nokuxosha umqeqeshi.
Ekhuluma ngemuva komdlalo weCeltic, uJohnson uveze ukuthi uyaqonda ukuthi akanaso isikhathi esanele nabadlali kanti nemidlalo iyahamba yingakho eseqhamuke neqhinga lokuthi asandise isikhathi.
“Sikwenza ngendlela okuningi kodwa kunesikhathi lapho sivele senze khona amaphutha abafana abancane bese sithwaliswa yilokho kanzima. Sifana nabantu abasemgodin. Uma kuzoba yithina futhi esenza amaphutha afana nalawa ngeke kulunge lutho. Inkinga enginayo wukuthi isikhathi anginaso. Esenginqume ukukwenza ukuthi sandise isikhathi ngokuthi siziqeqeshe emini nasebusuku. Mhlawumbe lokhu kuzosinika isikhathi esanele ukusebenza ikakhulukazi ekuqedelweni kwamathuba ngoba siyawakha," kusho uJohnson.
Akazange athande ukuphawula ngomdlalo wabo neChiefs ngaphandle kokuthi uyazi ukuthi kukhona lapho kufanele baqale baqoqe khona amaphuzu ngakho-ke uma kuyiChiefs, uzokujabulela lokho.
“Asikho esimeni sokubuka ukuthi udlala nobani bese sicabanga izinto eziningi. Wonke amaqembu esizobhekana nawo azosinika ithuba lokusuka kule ndawo esikuyona, okwethu wukulisebenzisa leli thuba. Akusho lutho ukuthi yiliphi iqembu.